TheComparison - Ny fampitahana vokatra tsara indrindra
Ny AMD dia nikasa hampitombo ny fanjifana herinaratra miaraka amin'ny RDNA 3 GPUs, fa tsy mitovy amin'ny Nvidia
Ny AMD dia hampitombo ny haavon'ny herinaratra miaraka amin'ny karatra grafika RDNA 3, araka ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanatanteraka Team Red. Niresaka tamin'i Sam Naffziger, filoha lefitra zokiolona, ​​mpikambana ao amin'ny orinasa ary Architect Architect ny Tom's Hardware (misokatra amin'ny tabilao vaovao).
Ny leak OnePlus dia manondro fitaovana vaovao marobe amin'ny asa
Ny OnePlus dia nanao anarana ho an'ny tenany ho mpanamboatra finday, saingy ankehitriny dia manana fitaovana hafa amidy ihany koa izy, ary araka ny fiparitahana vaovao dia toa maro amin'ireo fitaovana hafa ireo no havaozina alohan'ny faran'ny taona. .Araka ny mahazatra izany.
Ny tsaho momba ny Samsung Galaxy S23 dia milaza fa tsy hampiasa fakan-tsary selfie ambanin'ny efijery
Ny tsaho momba ny Samsung Galaxy S23 dia manomboka miangona, ary ny zavatra farany mahasarika ny masontsika dia ny fakan-tsary selfie – toa tsy mbola hivadika fakan-tsary eo ambanin'ny efijery eo anoloan'ny telefaona i Samsung. Izany dia avy amin'ny...
Ny karatra grafika GTX 1630 teti-bola an'i Nvidia dia mety hivoaka ao anatin'ny andro vitsivitsy
Ny GeForce GTX 1630 noheverina ho tonga an'i Nvidia, karatra grafika mikendry ny tsenan'ny fidirana, dia hanomboka amin'ny 28 Jona araka ny tsaho farany. noho izany ...
Afaka milalao Minecraft tahaka anao koa i AI izao – izao no maha-zava-dehibe azy
Ny manam-pahaizana OpenAI dia nanofana tambajotra neural hilalao Minecraft amin'ny ambaratonga ambony toy ny an'ny mpilalao olombelona. Ny tambajotra neural dia niofana tamin'ny 70 ora isan-karazany avy amin'ny lalao, nampian'ny angon-drakitra kely misy horonan-tsary izay ...
Google Pixel 7 Pro dia mety hanolotra fanavaozana fampisehoana lehibe amin'ny Pixel 6 Pro
(*7*)Fantatsika fa tena misy ny Google Pixel 7 sy Google Pixel 7 Pro ary ho avy amin'ny faran'ity taona ity, saingy tsy manana fampahalalana ofisialy momba azy ireo izahay. Ankehitriny, ny antsipiriany vao hita dia manambara bebe kokoa momba ny zavatra andrasana amin'ireo ...
Tokony hividy fifanarahana Kindle Prime Day ve ianao sa hiandry ela kokoa hividianana e-reader?
Amin'izao ankatoky ny Amazon Prime Day izao, mety hanontany tena ianao raha tokony hividy ireo fitaovana mahaliana anao amin'izao fotoana izao ianao na hiandry ela kokoa mandra-pahatongan'ny andro fihenam-bidy ho an'ny mpivarotra an-tserasera amin'ny 12 Jolay. Fitaovana malaza hitantsika miaraka amin'ny ...
Manakarama mpisolovava ny Google AI, fa izaho no mila mpisolovava
Ny olombelona dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana anthropomorphose zavatra akaiky. Antsoinay hoe "izy" ny sambo, miresaka amin'ny Roombasy, ary mihetsi-po mihitsy aza momba ny seza tsy ho ela. Na izany aza, tsy mitazona mpisolovava ho an'ny iray amin'izy ireo izahay; ary, hatramin'ny...
Ny hoavin'ny lalao Mac dia mety hanova ny tsy fivadihan'ny PC toa ahy
Na dia milalao amin'ny PC aza aho hatramin'ny sekoly ambaratonga faharoa, dia efa am-polony taona maro izay no nahatonga ahy hiverina amin'ny fitaovana Apple hatramin'ny andron'ny Oregon Trail sy ny lohateny edutainment tany am-boalohany. Ny zava-misy fa...
Apple AR/VR headset dia mety ho eto amin'ny Janoary 2023
Ny resabe momba ny headset AR/VR ho avy Apple dia tsy hiala, ary ankehitriny ny iray amin'ireo mpandinika indostrialy ambony ao Apple dia nandanjalanja ny filazana fa mety haseho amin'ny volana janoary 2023 ilay fitaovana.
Ny fomba nametrahan'i IBM Watson ny traikefa mpankafy marani-tsaina amin'ny Wimbledon 2022
Ny fiadiana ny ho tompondaka amin'ny tennis Wimbledon amin'ity taona ity dia heverina ho tena manan-tsaina sy manankarena indrindra amin'ny tantara noho ny fiaraha-miasa amin'ny IBM.
Ao amin'ny 'dingana farany amin'ny fampandrosoana' ny lalao manaraka avy amin'nySoftware, hoy ny talen'ny Elden Ring
Volana vitsy monja taorian'ny famoahana ny Elden Ring, mazava ho azy fa lavitra ny miala sasatra ny FromSoftware, miaraka amin'ny talen'ny Hidetaka Miyazaki nanambara fa ny studio dia manana lalao hafa amin'ny asa izay manakaiky ny faran'ny fivoarany. Ao anatin'ny...
6 zavatra tokony hodinihina rehefa mifidy ny rivotra fryer
Isika rehetra dia tia fryer an'habakabaka, sa tsy izany? Izy ireo dia lasa iray amin'ireo teknolojia fandrahoan-tsakafo mitombo haingana indrindra miaraka amin'ny tokantrano maro any Etazonia sy UK mirotsaka amin'ny fialam-boly tsy misy matavy. I Currys (any UK) ihany no nitatitra...
Ireo mpamorona ao amin'ny (*10*) Ring dia mety hiasa amin'ny lalao iray efa nandrasan'ny 10 taona
(*10*) Ring developer FromSoftware dia miasa amin'ny tetikasa vaovao maromaro, izay mametraka ny fanontaniana ny amin'ny zavatra ao amin'ny studio manaraka. ..
Windows 98 Mars Probe dia mahazo fanavaozana rindrambaiko taorian'ny roapolo taona
Mety ho ao an-tsain'ny ankamaroantsika eto an-tany ny fitantanana patch ho an'ny dikan-teny farany amin'ny Windows, fa mandritra izany fotoana izany, ny sambon-danitra Mars Express an'ny European Space Agency (ESA) dia nahazo ny fanavaozana voalohany tamin'ny rafitra. ...
Tian'i Meta ho toy ny tena fiainana ny tontolo virtoaly
Meta sy vondrona mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Texas ao Austin (UT Austin) dia miasa mba hitondra feo tena misy ao amin'ny Metaverse. Araka ny fanazavan'i Kristen Garuman, Talen'ny Fikarohana ho an'ny Meta AI (misokatra amin'ny tabilao vaovao), dia mampitombo ny zava-misy Y. ..
Ny fanamafisam-peo Dolby Atmos vaovao an'ny LG dia amidy izao
Iray amin'ireo teknolojia vaovao be resaka indrindra tao amin'ny CES tamin'ity taona ity izany, ary afaka mandre ny momba azy manokana ireo mpankafy teatra an-trano, miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo Dolby Atmos vaovao revolisionera LG.
Ny fanavaozana Windows farany dia mety hanamboatra ny VPN tapaka
Vao avy namoaka sarin'ny fanavaozana telo vaovao i Microsoft, izay toa mamaha olana isan-karazany mifandray amin'ny dikan-Windows sasany taorian'ny fanavaozana farany farany. Araka ny notaterin'ny BleepingComputer, ny...
Manambara ny fikasany handao an'i Rosia sy Belarosia ny Cisco
Vaovao sy fanavaozana | 0 Comments
Nanambara ny fikasany handao an'i Rosia amin'ny fomba ofisialy ny Cisco, hampitsahatra ny asa aman-draharahany any Rosia sy Belarosia ho setrin'ny fananiham-bohitra an'i Okraina tamin'ny fiandohan'ity taona ity.Namoaka fanambarana voalohany ny orinasan'ny tambajotra tamin'ny 3 martsa,...
Ny tsaho farany momba ny AirPods Pro 2 dia momba ity raharaha ity
Tsy takona afenina fa ny écouteur Bluetooth AirPods Pro 2 nandrasana hatry ny ela dia hitovy amin'ny dikan-teny ankehitriny, saingy araka ny fiparitahan'ny vaovao dia mety tsy hisy ny carte de charge.
Ity dongle hendry ity dia manakana ny mpanafika tsy hiditra amin'ny seranan-tsambo HDMI anao
Nisy dongle vaovao novolavolaina mba hisakanana ireo mpanao heloka bevava amin'ny aterineto tsy hampiasa ny seranan-tsambo HDMI ho fitaovana handresena ireo fitaovana kendrena (Misokatra amin'ny tabilao vaovao).
Mihamanakaiky ny fiafaran'ny fiainan'ny Windows 8.1
Manakaiky tsy ho ela ny fiafaran'ny androm-piainan'ny Windows 8.1, miaraka amin'ny fanohanana maharitra ny rafitra fiasana antenaina hifarana amin'ny fiandohan'ny taona 2023. Nifarana tamin'ny 8.1 Janoary 9 ny fanohanana ankapobeny ho an'ny Windows 2021, ary amin'ny volana manaraka dia hanomboka handefa...
Lalana lavitra Apple vaovao (*16*) 4K Siri hita tao amin'ny iOS 16 | radar teknolojia
Ny tsy fahombiazan'ny famoahana ny tvOS 16 tamin'ny Apple WWDC 2022 vao haingana dia fahadisoam-panantenana ho an'ireo mpankafy ny boaty fandefasana Apple (*16*) 4K an'ny orinasa. Ary raha afaka nahazo endri-javatra vaovao sasany avy amin'ny tvOS 16 beta izahay ...
Ny Farihy Intel Raptor dia efa 20% haingana kokoa noho ny Farihy Alder amin'ny mari-pamantarana tafaporitsaka
Ny benchmark iray tafaporitsaka vao haingana dia mety nanambara fa ny Intel Raptor Lake Core i9-13900K dia mety ho 20% haingana kokoa noho ny Alder Lake Core i9-12900K rehefa misy kofehy maromaro.
Lahatsoratra sy pejy malaza